COFF Fiidiyowga Dheecaannada
Waqtiga: 2020-12-10 Faallo: 50
Warku markan kama hadlayo COFF gaarsiinta, ka hadlin alaabta COFF, gaar ahaan ka hadlayaa ku saabsan video ka shaqeeya bogga COFF.
Falsafada COFF waxay had iyo jeer ahayd "macmiilka marka hore, u adeegid feejigan". Diirada halkan waa macaamiisha iyo ujeedooyinka, oo leh fikradda ugu xirfadda badan si ay u siiyaan macaamiisha adeegyo kala duwan, ka fikir waxa macaamiishu rabaan, sameeyaan waxa macaamiishu rabaan.
Dalabkayada iibka dhabta ah, macaamiil badan iyo shaqaalaheena iibka ayaa yeelan doona wax badan oo aan la sheegi karin faahfaahin wax soo saarka, qaabka baakadaha, habka wax soo saarka, faahfaahinta gaarsiinta, qaabilaadda macaamiishu waxay u baahan yihiin inay fiiro gaar ah u yeeshaan arrimo taxane ah. Sidaa darteed, COFF waxay bixisaa fiidiyoow ka dib fiidiyoow si ay u hagto una sharaxdo xaaladahan aan la soo koobi karin, si ay macaamiishu u yeeshaan dareen dareen leh iyo xukun sax ah, si kor loogu qaado macmiil kasta si uu u yeesho dareen kalsoonida iibkayaga.
Laga soo bilaabo hordhaca shirkadda ilaa habka wax soo saarka ilaa bixinta alaabta, isku xirka kasta waa kamarad sawir leh marar badan si loo soo saaro cajalado faahfaahsan, gaaban oo sahlan in la arko. Gaar ahaan habka wax soo saarka ee fiidiyowga, si macaamiishu shakhsi ahaan u dareemaan tayada alaabtayada, heerka tiknoolajiyada iyo ilaalinta alaabta. Tani waa kalsoonida iyo taageerada COFF ay sannadihii la soo dhaafay ka heshay macaamiisha adduunka oo dhan.
Waxaan rajeyneynaa in warkaan, uu u oggolaan karo macaamiisha cusub iyo kuwa hore ma aha oo kaliya inay fiiro gaar ah u yeeshaan warkeena, laakiin sidoo kale inta badan booqo boggayaga fiidiyowga. Si wax ku ool ah u wanaaji fahamka macaamiisha ee COFF, ka caawi macaamiisha inay fahmaan wax soo saarka iyo kalsoonida COFF.
Haddii aad hayso wax codsi ah ama su'aalo dheeraad ah, fadlan la xidhiidh Wellish wu@nbcoff.com.Wellish Wu
Previous: 0.2BBL-2BBL Haanta Halsano ee Modular/Haanta Beer ee Iftiinka leh
Xiga: 20L Electric Brewing (cabbirka caadiga ah ayaa la heli karaa)